Ihe edokọbara anya maka Internet Explorer
Na ihe nchọgharị ọ bụla, ị nwere ike ịdebanye ebe ị ga-ahọrọ ọkacha mmasị ma laghachi na ya n'oge ọ bụla na-enweghị ọchụchọ ndị na-adịghị mkpa. Na-enwe afọ ojuju. Ma ka oge na-aga, ihe edeturu ndị dị otú ahụ nwere ike imetụta ọtụtụ ihe ma chọpụta ebe nrụọrụ weebụ achọrọ dị ka ihe siri ike. N'okwu a, chekwaa ọnọdụ nwere ike ịhụ akara edokọbara anya - obere vidiyo nke ibe Ịntanetị, nke etinyebere na ebe ụfọdụ nke ihe nchọgharị ma ọ bụ nchịkwa nchịkwa.
Wụgharịa Internet Explorer
Mgbe ị wụnye Internet Explorer, ị ghaghị ime nhazi mbụ ya. Ekele ya, ị nwere ike iwelie mmemme nke usoro ihe omume ahụ ma mee ka ọ bụrụ onye ọrụ enyi dịka o kwere mee. Otu esi edozi Internet Explorer Njirimara niile A na-eme ntọala mbụ nke nchọgharị Internet Explorer na mpaghara "Ngwaọrụ - Nhọrọ Ịntanetị".
Ntuziaka Toolbar Google maka Nchọgharị Internet Explorer
N'ịbụ ndị arụnyere Internet Explorer, ụfọdụ ndị ọrụ anaghị enwe afọ ojuju na njirimara atụmatụ nke gụnyere. Iji gbasaa ike ya, ị nwere ike ibudata ngwa ndị ọzọ. Google Toolbar maka Internet Explorer bụ ngwá ọrụ pụrụ iche nke gụnyere ntọala dị iche iche maka ihe nchọgharị ahụ.
Lee okwuntughe echekwara na Internet Explorer
Enwere ike iji nlezianya wee banye na saịtị na-enweghị ike ịbanye na saịtị n'enweghị nnabata okwuntughe, ọbụnadị Internet Explorer nwere ọrụ dị otú ahụ. N'eziokwu, a na-echekwa data ndị a site na ebe doro anya. Kedu otu? Nanị maka ya, anyị ga-ekwukwa n'ihu. Ịlele okwuntughe na Internet Explorer Ka IE na-ejikọta ya na Windows, logins na okwuntughe echekwara n'ime ya adịghị n'ime ihe nchọgharị n'onwe ya, kama na ngalaba nkewa nke usoro.
Hichapụ cache na Internet Explorer
Nchịkọta nke ibe weebụ gara aga, ihe oyiyi, mkpokọta ebe nrụọrụ weebụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa iji lelee ibe weebụ na-echekwa na draịvụ kọmputa na ihe mkpuchi ihe nchọgharị. Nke a bụ ụdị nchekwa mpaghara nke na-enye gị ohere iji nyochaa saịtị ahụ iji jiri akụ ndị ebudatara na mbụ, si otú a na-agba ọsọ usoro nbudata ngwa weebụ.
Internet Explorer. Ntuziaka maka faịlụ nchekwa oge
A na-eji nyocha maka folda dịka akpa maka ichekwa data natara n'aka netwọk. Site na ndabara, maka Internet Explorer, ndekọ a dị na ndekọ Windows. Mana ọ bụrụ na a haziri profaịlụ onye ọrụ na PC, ọ dị na adreesị na-esonụ: C: Users username AppData Local Microsoft Windows Windows INetCache.
Dị ka ọ bụla ihe omume ọzọ na Internet Explorer, nsogbu nwere ike ibili: Internet Explorer anaghị emeghe ibe, maọbụ ọ naghị amalite ma ọlị. Na nkenke, nsogbu nwere ike igosipụta onwe ha na-arụ ọrụ na ngwa ọ bụla, na ihe nchọgharị Microsoft adịghị arụ ọrụ. Ihe mere Internet Explorer anaghị arụ ọrụ na Windows 7 ma ọ bụ ihe mere Internet Explorer anaghị arụ ọrụ na Windows 10 ma ọ bụ na usoro Windows ọ bụla ọzọ bụ karịa.
IE. Lee okwuntughe echekwara
Dịka na ihe nchọgharị ndị ọzọ, Internet Explorer (IE) nwere paswọọdụ na-azọpụta ikike nke na-enye ohere onye ọrụ iji chekwaa ikike ikike (aha njirimara na paswọọdụ) maka ịnweta ụdị enyemaka Intanet. Nke a dị nnọọ mfe ka ọ na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na-aga n'ihu iji nweta saịtị na n'oge ọ bụla iji hụ nbanye na paswọọdụ gị.
Ihe nke Yandex maka Internet Explorer
Ihe Yandex maka Internet Explorer ma ọ bụ Yandex Bar maka Internet Explorer (aha nke usoro ochie nke usoro ihe omume ahụ, nke dị ruo 2012) bụ ngwa na-enye n'efu ka ewepụtara na onye ọrụ dịka ntinye ihe nchọgharị. Ebumnuche bụ isi nke ngwaahịa a bụ ịgbasa ọrụ nke ihe nchọgharị weebụ ma melite ya.
Nchọpụta ihe nchọgharị ntanetị Internet Explorer
Ntugharị ndabara bụ ngwa ga-emeghe ibe weebụ. Ebumnuche nke ịhọrọ ihe nchọgharị na-adịghị emetụta ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ịnwe abụọ ma ọ̄ bụ karịa ngwanrọ software arụnyere na kọmputa gị nke enwere ike iji mee nchọgharị na weebụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị gụọ otu akwụkwọ kọmputa nke nwere njikọ na saịtị ahụ ma soro ya, mgbe ahụ, ọ ga-emeghe na nchọgharị ndabere, ọ bụghị na ihe nchọgharị ịchọrọ.
Nzọụkwụ. Esi wepu Internet Explorer
N'oge enwere ọtụtụ ọnụọgụ dị iche iche nke nwere ike ịwụnye ngwa ngwa ma wepụ ya na nke e wuru n'ime ya (maka Windows) - Internet Explorer 11 (IE), nke siri ike iwepụ site na Windows OS ọzọ karịa ndị ogbo ya, ma ọ bụ kama nke ahụ, ọ gaghị ekwe omume ma ọlị. Eziokwu ahụ bụ na Microsoft ejirila n'aka na enweghị ike ịmepụ ihe nchọgharị weebụ a: enweghi ike iwepụ ya ma ọ bụghị Ngwá Ọrụ, ma ọ bụ mmemme pụrụ iche, ma ọ bụ ihe ntinye onye ahụ, ma ọ bụ iwepụ akwụkwọ nke usoro ihe omume ahụ.
Gbadaa na Internet Explorer na Windows 10
Ndị ọrụ Windows 10 enweghị ike ịmatakwu na OS a na-eweta ihe abụọ dị n'ime ya: Microsoft Edge na Internet Explorer (IE), na Microsoft Edge, na njirimara ya na njirimara ọrụ, e mebere ya karịa IE. Ịhapụ ikikere iji iji Internet Explorer eme ihe efu, n'ihi ya, ndị ọrụ nwere ajụjụ gbasara otu esi gbanyụọ IE.
Kwado kuki na Internet Explorer
Kuki, ma ọ bụ kuki naanị, bụ ntakịrị data na ezigara na kọmputa onye ọrụ mgbe ị na-eme nchọgharị na ebe nrụọrụ weebụ. Dị ka a na-achị, a na-eji ha maka nyocha, ịchekwa ntọala onye ọrụ na mmasị ha n'otu n'otu na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla, idebe ọnụ ọgụgụ na onye ọrụ, na ihe ndị yiri ya.
Kedu ihe mere na ọ bụghị ihe nchọgharị niile ma e wezụga Internet Explorer?
Mgbe ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ịchọta nsogbu mgbe ihe nchọgharị niile ma e wezụga Internet Explorer kwụsị ọrụ. Nke a na-agbagha ọtụtụ. Gịnị mere nke a ji eme na otu esi edozi nsogbu ahụ? Ka anyi choo ihe kpatara ya. Ntak naanị Internet Explorer na - arụ ọrụ, ihe nchọgharị ndị ọzọ niile abụghị Virus Ihe kpatara nsogbu a bụ ihe kachasị na kọmputa.
Na-agbakwụnye saịtị na saịtị ndị a tụkwasịrị obi na Internet Explorer
Ọtụtụ mgbe na ọnọdụ nchekwa dị elu, Internet Explorer enweghị ike igosi saịtị ụfọdụ. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ na-egbochi ụfọdụ ọdịnaya na ibe weebụ, ebe ọ bụ na ihe nchọgharị ahụ enweghị ike ịchọpụta na ịdabere n'Intanet. N'okwu ndị dị otú a, iji rụọ ọrụ na saịtị ahụ, ịkwesịrị ịgbakwunye ya na ndepụta nke saịtị ndị a tụkwasịrị obi.
Internet Explorer. Reinstall na Ndozi Nchọgharị
Nsogbu mgbe niile na nbudata na ịrụ ọrụ ziri ezi nke Internet Explorer (IE) nwere ike igosi na ọ bụ oge iji weghachi ma ọ bụ weghachite ihe nchọgharị ahụ. Nke a nwere ike iyi ka ọ bụ usoro dị mgbagwoju anya na mgbagwoju anya, mana n'eziokwu, ọbụna onye ọrụ PC novice ga-enwe ike iweghachite Internet Explorer ma ọ bụ ọbụna dozie ya.
Gbanyụọ ọnọdụ offline na Internet Explorer
Ọnọdụ na-anọghị na nchọgharị bụ ikike imeghe ibe weebụ nke ị hụbu na-enweghị ịnweta Ịntanetị. Nke a dị mfe, mana enwere oge ị chọrọ ịpụ na ọnọdụ a. Dị ka a na-achị, a ghaghị ime nke a ma ọ bụrụ na ihe nchọgharị ahụ na-agbanwe agbanwe na-agagharị na ọnọdụ offline, ọ bụrụgodị na netwọk dị.
Windows 7. Gbanyụọ Internet Explorer
Igwe ihe nchọgharị n'ime Internet Explorer (IE) anaghị eme ka ọtụtụ ndị ọrụ Windows rụọ ọrụ, ha na-ahọrọkwa ọkachamara ngwaahịa ndị ọzọ maka ịlele ihe ntanetị. Dika onu ogugu, onu ogugu nke IE na ada kwa afo, ya mere o di ezi uche na enwere ochicho iwepu ihe nchoputa a site na PC gi.
Gini mere Internet Explorer kwụsịrị ịrụ ọrụ?
Mgbe ị na-arụ ọrụ na Internet Explorer, enwere ike ịkwụsị ọrụ ya na mberede. Ọ bụrụ na nke a mere otu ugboro, ọ bụghị egwu, ma mgbe ihe nchọgharị ahụ mechiri ọ bụla minit abụọ, e nwere ihe mere ị ga-eji chee banyere ihe kpatara ya. Ka anyị tụlee ya ọnụ. Gini mere Internet Explorer kpara?
Ntọala n'ime Internet Explorer
Na-emekarị, njehie na ihe nchọgharị Internet Explorer mgbe emechara mwube ihe nchọgharị ahụ n'ihi omume nke onye ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ, nwere ike ime mgbanwe na mwube ihe nchọgharị n'enweghị ihe ọmụma onye ọrụ. N'ọnọdụ ọ bụla, iji kpochapụ njehie ndị mepụtara site na paragraf ọhụrụ ahụ, ịkwesịrị ịtọgharịa ntọala ihe nchọgharị niile, ya bụ, weghachite ntọala ndabara.
https://termotools.com ig.termotools.com © Internet Explorer 2020